Global News Nepal मंगलबार सेयर बजारमा उदासीनता, कतिऔं विन्दुमा रोकियो नेप्से ? (हेर्नुहोस्) - Global News Nepal
मंगलबार सेयर बजारमा उदासीनता, कतिऔं विन्दुमा रोकियो नेप्से ? (हेर्नुहोस्)
काठमाडौं : मंगलबार सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा उदासीनता छाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से परिसूचक ९.०१ अंकले घटेर २ हजार ९८५.५७ विन्दुमा झरेको हो ।
नेप्सेका अनुसार आज ‘क’ वर्गका ठूला कम्पनीका सेन्सेटिभ इन्डेक्स समेत २.८२ अंकले घटेर ५५८.११ विन्दुमा झरेको छ । यस दिन व्यापार, होटल तथा पर्यटन, हाइड्रोपावर, म्यानु एण्ड प्रो र म्युचुअल फण्ड समूहहरु धनात्मक हुँदा बैंकिङ्ग, विकास बैंक, फाइनान्स, जीवन बीमा तथा निर्जीवन बीमा लगायतका समूहहरु ऋणात्मक भएका छन् ।
आज सबैभन्दा धेरै अरुण काबेली पावर कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको ३८ करोड ८७ लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको २६ करोड ९८ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको २४ करोड १८ लाख, एनआइसी एशिया बैंकको २३ करोड ४९ लाख, कृषि विकास बैंकको २२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ ।
त्यसैगरी आज सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी उन्नती कोष र लक्ष्मी इक्यिुटी फण्डका इकाईधनी र बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । सबैभन्दा धेरै आईसीएफसी फाइनान्स कम्पनीका इकाई धनी र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।
कुल २१९ कम्पनीका ३ करोड १६ लाख कित्ता माथिको सेयर ८४ हजार ४६८ पटक बजारमा किनबेच हुँदा आज कुल ७ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख ९४ हजार २६९ रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।